Dzidza mitauro ine yemahara software uye GNU / Linux ... | Linux Vakapindwa muropa
Dzidza mitauro ine yemahara software uye GNU / Linux ...
Zve Android pane zvakawanda zvinonakidza zvinoshandiswa zvinowanikwa kuti udzidze mitauro. Pakati pavo ndaizoratidzira maviri pamusoro pevamwe vese, mumwe wavo ndiDuolingo (mahara) uye imwe yeABA Chirungu (yakabhadharwa), kune rimwe divi iwe unezvakanaka chaizvo zvakaita seMemrise (yemahara) nevamwe. Asi chii chinyorwa ichi chiri kutaura nezvese sarudzo dziripo dzidza mumwe mutauro kana mutauro wekunze kubva kune yedu GNU / Linux kugovera nemamwe mapurogiramu anotonhorera.
Unogona kushandisa zviwanikwa zvakawanda, semuenzaniso kugadzira ako ako smartcards uye kuisa mifananidzo kana mifananidzo uye neshoko rinoenderana, chimwe chinhu chakashandiswa mukudzidzisa kwevadiki asi chinoshandawo kune vakuru, nekuti zviri nyore kuti uropi hwedu huenzanise mifananidzo pane kungoverenga mazwi neshanduro dzawo… Zvinotomboitika kwandiri kuti ndishandise izwi rako rerekodhi re distro kuzviteerera uchitaura mumwe mutauro uye uchitoshandisa Audacity. Pawebhu, iwe unotoziva kuti une huwandu hwekubatsira mawebhusaiti, uye kunyangwe Google Dudziro, iyo inosanganisira basa rekuverenga mazwi mune chero mutauro. Asi isu hatidi izvi, zvatiri kutsvaga pano ndizvo chaiwo mapurogiramu uye yemuno kudzidza mumwe mutauro:
OpenTeacher: ishoko remazwi rekudzidza mimwe mitauro. Iyo yemahara uye yakavhurwa sosi chirongwa maunogona kuchengeta zvinyorwa zvemashoko mumutauro uye dudziro yavo kuti uongorore.
Perroquet: ndechimwe chishandiso chaunogona kudzidzisa nacho hunyanzvi hwemuromo mune mimwe mitauro.
FLTR: inogona kuverenga zvinyorwa mune mumwe mutauro kuti ugone kugadzira nzeve yako uye uone kuti inodudzwa sei. Kunyangwe uchenjere nemamwe mapurogiramu erudzi urwu anoshandisa mataurirwo ekutaura kuverenga zvinyorwa uye madudziro acho anogona kunge asiri echokwadi ... Ini ndinokurudzira iwo mabhanga emanzwi akanyorwa nevatauri vemuno vaunogona kuwana pamambure.
Parley: chirongwa cheKDE kudzidzira mazwi mune mumwe mutauro, zvakafanana nezvaungaite neOverTeacher.
Verbiste: Inongoshanda chete pakubatana kwechiFrench neItaly, asi kana uri kutsvaga kudzidza mitauro iyi inogona kunge iri sarudzo yakanaka kwauri.
Tagaini jisho: senge yapfuura, inotarisa kuduramazwi reJapan uye kanji duramazwi, saka haisi yemimwe mitauro ...
Anky: chirongwa chinonakidza chinokwenenzverwa kudzidza kuburikidza nemadhigadhi, ayo, sezvandambotaura, inzira yakanaka yekurondedzera pfungwa.
Kudzidza nemagwaro: chirongwa chekudzidza nekuverenga nekuteerera nemagwaro mune mumwe mutauro.
Pinda muchiChinese: inotarisa kuChinese, murairidzi uyo anobatsira avo vanoda kudzidza mutauro weAsia, kunyange hazvo yakanangana nevatauri veChirungu, saka unofanirwa kuziva mutauro uyu.
Usakanganwa kuti mazhinji eApple maapplication senge Duolingo, ABA, nezvimwewo, iva newebhu-based interface zvakare, kuti ugone kuishandisa kubva kubhurawuza rako.
Uye usakanganwa, chakanakisa pane zvese ndeche shandisa mameseji epakarepo kana mapurogiramu emusangano wevhidhiyo kutaura nevatorwa. Nzira yakanakisa yekudzidza mitauro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Dzidza mitauro ine yemahara software uye GNU / Linux ...
Akanaka wekare Woz anoremekedza uye anorumbidza Linux
Masero Akafa anoburitsa hutsinye hutsva